बाढीका कारण ६५ जनाको मृत्यु (कुन जिल्लामा कति ?) - अभियान खबर
बाढीका कारण ६५ जनाको मृत्यु (कुन जिल्लामा कति ?)
काठमाडौं । चारदिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण अहिलेसम्म ६५ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपाली प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार विभिन्न जिल्लामा ४१ जना पुरुष र २४ महिला गरी ६५ जनाको मृत्यु भएको हो । बाढी पहिरोमा पर्दा ३८ जना घाइते भएका छन् । जसमा पुरुष २१ र महिला १७ जना रहेका छन् भने ३० जना बेपत्ता छन् ।
प्रहरीका अनुसार १४४६ जनाको सशुकल उद्धार गरिएको छ । सोमबार बिहानसम्मको विवरण भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तो छ जिल्लाको सूची
फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको कानून बनाउन सर्वोच्चको आदेश
Posted on January 2, 2019 Author abhiyaan
काठमाडौं । खाडी मुलुक जाने कामदारको हकमा लागू भएको निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । मलेसियासहित खाडी मुलुक जाने कामदारको हकमा आवश्यक कानून र संयन्त्रको व्यवस्था लागू गर्न र गराउन अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको हो । सामाजिक न्यायको लागि कानून नीति नियम मञ्चले […]
Posted on September 24, 2018 September 24, 2018 Author abhiyaan
असोज, काठमाडौं । गंगामाया अधिकारीका छोरा नुरप्रसाद अधिकारी पक्राउ परेका छन् । ज्यान मुद्दामा अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरले उनलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत, ललितपुरबाट ७ दिनका लागि अनुमति लिएको छ । परिसरका एसपी शेखर खनालले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार आइतबार उच्च अदालत पाटनमा तोडफोड गर्दै त्यहाँका अधिकृतलाई […]
कांग्रेसले कात्तिकभित्र पार्टी संरचना समायोजन गरिसक्ने
Posted on August 22, 2019 Author abhiyaan
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पार्टीको स्थानीय संरचनालाई सङ्घीय राज्य संरचनाअनुरूप रुपान्तरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । पार्टीको स्थानीय संरचनालाई सङ्घीय राज्य संरचनाअनुसार रूपान्तरण गर्न ‘नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह सङ्गठन पुनःसरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका, २०७६’ लाई अन्तिम रूप दिई कांग्रेसले आज सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसको गत साउन १७ गते बसेको केन्द्रीय […]